SimplyCast: Madal Isgaarsiinta Qulqulka Macaamiisha | Martech Zone
The Si fududCast 360 Maareeyaha otomaatiga wuxuu isku daraa wax soo saarka 15 kanaal hal madal, oo awood u siiya marekters inay dhisaan ololeyaal suuqgeyn otomaatig ah iyo socodka isgaarsiinta. Xalkoodu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku gaadho dadka saxda ah waqtiga saxda ah iyaga oo u maraya habka isgaadhsiinta ay doorbidaan. La macaamil macaamiisha iyo rajooyinka ku saleysan xogta ku kaydsan, danahooda, iyo la macaamilkoodii hore ee ururkaaga si loo kordhiyo soo noqoshadaada maalgashiga.
The Si fududCast xalinta otomatiga suuq geynta ayaa kuu ogolaanaya inaad dejiso ololeyaashaada sida shaxda qulqulka, kuu ogolaanaya inaad gaarto oo aad la macaamisho rajadaada iyo macaamiishaada adigoo u maraya wadiiqooyin badan
Maamulka Xiriirka Macaamiisha - Si sax ah u ogow cidda hoggaankaaga kulul ay yihiin iyo sida looga codsado baahidooda.
Email Marketing Abuur, dir oo raadso ololeyaal suuqgeyn email ah.
Liiska Maamulaha - Abuur, kaydi & qaybiso liistada xiriiriyahaaga oo leh karti aan xadidnayn.
Form dhise - Abuur foomamka khadka tooska ah ee internetka oo ay ku jiraan sheyga ugu fudud ee suuqa yaalla Looma baahna aqoonta HTML.
Goobaha Bogagga - Habka ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loo abuuro bogag degitaanno badan ah si loola socdo bogga ugu fiican.
Baaritaannada Internetka - Abuur oo soo dir sahanno khadka tooska ah oo daqiiqado ku soo jiita jawaab celinta isticmaalaha.
Raadinta Link - Si fudud loola socdo riix-dhaafka iyo sicirka furan si looga caawiyo go'aaminta suuqgeynta sida ugu fiican u shaqeyneysa.
Jawaab-bixiye - Xiriirro adag oo deg deg ah la samee xallintooda dabagalka otomaatiga ah.
Kormeeraha liiska madow - Ha fursad u helin kaabayaasha suuqgeynta iyo sumcaddaada. Bilow la socodka IP-gaaga maanta.
Suuq Fakis - U dir kumbuyuutarro faakis ah kumanaan hay'adood dhib la'aan. Ku habboon bartilmaameedka ganacsiyada maxalliga ah.
Maamulka Event - ololayaasha dhacdooyinka oo leh qalab si loo kordhiyo xaadiritaanka.
Baahinta Codka - Si otomaatig ah u sii daa fariimaha codka ee la duubay si aad ugu wargeliso una xasuusiso macaamiishaada.
Suuqgeynta Qoraalka - la xiriir macaamiishaada adiga oo fariintaada toos ugu dhigaya gacmahooda.
Suuqgeynta Bulshada - la dhexgal shabakadaha bulshada ee ugu caansan maanta, oo ay ku jiraan Facebook iyo Twitter.
Tags: wariyaha autokormeeraha liiska madowEmail Marketingmaaraynta dhacdadaFacebookfaxfakiska marektingqaab dhismeboggaga soo degayamaaraynta liiskasahan onlineqaybintasuuq-geynta suuqasuuqgeynta qoraalkaTwitterbaahinta codka